Banaanbax Looga Soo Horjeeday Madaxweyne Farmaajo Baa Maanta Ka Dhacay Muqdisho – Great Banaadir
MUQDISHO (WBW: The GBM) – Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho, gaar ahaan Degmada Wadajir ayaa lagu soo waramayaa in maanta uu ka dhacay banaanbax looga soo horjeeday Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Warka wuxuu darayaa in dadka banaanbaxayayey ay isugu jireen Haween iyo Odayaal, waxeyna banaanbaxooda ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan Qaabka Madaxweyne Farmaajo uu u doonayo iney u dhacdo Doorashada 2021-da maadaama uu Madaxweyne Farmaajo uu horay u magacaabay Gudi Doorasho oo dhinaciisa ah isla markaana gudigaasi kasii koobmo taageeroyaashiisa sida ‘Xoogaga Wadaniyiinta, Ciidamada Nabad Sugida (NISA), iyo How-wadeenada Dowladda Soomaaliya’ oo weliba aad ugu sii dhow isaga.
Banaanbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku dhegan yihiin Sawiradda Madaxweynaha, waxeyna ku qeylinayeen “Doonimeyno Kaligiis Talis, Ha Dhaco Madaxweynaha”.
Qaar kamid ah banaanbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta, ayaa baaq u diray Madaxweyne Farmaajo, waxeyna baaqooda ku sheegeen ineysan diidi laheyn Doorasho Xalaal ah, asiise ay diidan yihiin Doorasho Hal Dhinac ah.
Mid kamid ahna, dadkii banaanbaxa dhigayay, waxaa uu sheegay “In aysan dooneynin dadka kaligiis taliska ah, horeyna uu keligiis talis uu ugu dhacay Jeneraal Maxamed Siyaad Barre.”
Banaanbaxa maanta ka dhacay Degmada Wadair ee Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu kusoo aadayaa iyada oo saacado ay ka harsan yihiin markii Soomaali isku duuban ay ka adkaadeen Keli Taliyehii Soomaaliya Jeneraal Maxamed Siyaad Barre iyo kuwii taageersanaa, taariikhda markii ay aheyd 26-dii Janaayo, sanadkii 1991-dii.
Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]) waxaa markasta lagala socon karaa wararka xiisa leh isla markaana sii kulul.